तीन कम्पनीको वित्तीय विवरण सार्वजनिक, कुनको कस्तो छ अवस्था ? – Jagaran Nepal
तीन कम्पनीको वित्तीय विवरण सार्वजनिक, कुनको कस्तो छ अवस्था ?
Jagaran Nepal सोमबार, माघ १७, २०७८
काठमाडौं । सोमबार तीन कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । पाँचथर पावर कम्पनी, नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त र अरुण काबेली पावर कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पाँचथर पावर कम्पनी
पाँचथर पावर कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमासीक वित्तीय विवरण सोमवार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा रू. १४ करोड ७८ लाख भन्दा बढी नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको दोस्रो त्रैमाससको तुलनामा ६४ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । कम्पनीले गत आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा रू. ८ करोड ९७ लाख नाफा कमाएको थियो ।
चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको अन्य आम्दानी र विद्युत विक्री आम्दानीमा वृद्धि भएकाले नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो । सो अवधिमा कम्पनीले विद्युत विक्री बापत रू. २६ करोड ३५ लाख आम्दानी गरेको छ भने रू.१५ लाख ९१ हजार अन्य आम्दानी गरेको हो । चुक्ता पूँजी रू. ९६ करोड २५ लाख रहेको छ भने जगेडामा रू. १० करोड २७ लाख सञ्चित गरेको छ ।
गत आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको जगेडा कोष रू.५ करोड ४ लाख ऋणात्मक थियो । त्यसैगरी कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू.१५ दशमलव ३६,तरलता अनुपात ४ दशलमव ७६ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११० दशलमव ६७ रहेको छ ।
नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त
नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालू आवको दोस्रो त्रैमासीक वित्तीय विवरण सोमवार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको नाफा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा ८३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
कम्पनीले गत आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा रू. १३ करोड ४१ लाख नाफा कमाएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा वृद्धि भएर रू. २४ करोड ६१ लाख पुगेको हो । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा वृद्धि भएकाले नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो ।
खुद ब्याज आम्दानी गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा ७२ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा ८३ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । कम्पनीले सम्भावित जोखिम बापतको ब्यवस्थामा कम रकम छुट्याएकाले सञ्चालन नाफा बढेसँगै खुद नाफा बढ्न पुगेको हो । कम्पनीले गत आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा सम्भावित जोखिम बापतको ब्यवस्थामा रू. २ करोड ५६ लाख छुट्याएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा रू. ४१ लाख ४५ हजार छुट्याएको छ ।
कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. ५८ करोड ६६ लाख रहेको छ भने जगेडामा रू. ५९ करोड ४१ लाख सञ्चित गरेको हो । चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू. ६ अर्ब ४३ करोड सापटि लिएर रू.२ अर्ब ८४ करोड निक्षेप संकलन गरेर रू. १० अर्ब २२ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । सो अवधिमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ८३ दशमलव ६७, मूल्य आम्दानी अनुपात ३२ दशमलव ३३ गुणा,तरलता अनुपात ७ दशमलव ५३ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २०१ दशमलव २८ रहेको छ ।
अरुण काबेली पावर
अरुण काबेली पावर कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमासीक वित्तीय विवरण सोमवार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा रू.२० करोड ३ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ९ दशमलव ६३ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । कम्पनीले गत आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा रू. १८ करोड २६ लाख नाफा कमाएको थियो ।
चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको विद्युत विक्री आम्दानीमा वृद्धि भएसँगै नाफा बढेको हो । कम्पनीले विद्युत विक्री आम्दानी गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा १६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत आवमा कम्पनीले विद्युत विक्री बापत रू. ३८ करोड ८५ लाख आम्दानी गरेकोमा चालू आवमा वृद्धिभ एर रू. ४५ करोड ४१ लाख पुगेको हो ।
कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब ८५ करोड रहेको छ भने जगेडामा रू. २० करोड ६२ लाख सञ्चित गरेको छ । त्यसैगरी चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू.२१ दशमलव ५९, मूल्य आम्दानी अनुपात २६ दशमलव ५८ गुणा, तरलता अनुपात शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १११ दशमलव १२ रहेको छ ।
१ लाख नजिक पुग्यो सुनको भाउ, कति छ आज ?
आज ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ
आज ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कति पुग्यो तोलाको ?
तोलामै १५०० रुपैयाँले बढ्याे सुनकाे भाउ
प्रतितोला ९४ हजार पुग्यो सुनको मूल्य
ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति पुग्यो ?
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्वस्थ
यो साता चम्किंदै छ यी ७ राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
के अभिनेत्री करिश्मा कपुरले विवाह गर्न लागेकी हुन ? दोस्रो विवाहको हल्लाले बलिउडमा हंगामा
पुटिनलाई ठूलै रोग लागेको आशंका : लगातार हल्लिरहेको थियो खुट्टा, हातको चाल पनि अस्वभाविक (भिडियो)
अजय देवगनकि छोरीले आफ्नो जन्मदिनमा कालो ड्रेसमा वाइन गिलास समातेको तस्बिर एकाएक भाइरल
पल प्रकरण : बाबुछोरीले नै बयान फेरेपछि अभिनेत्री आंचल शर्माले दिईन कडा दनक
जतिबेला निस्कन चाहेँ, चिप्लिएर त्यहि पुगेँ …..
हप्तामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णय
नयाँ वर्ष २०७९ सालमा चम्किंदैछ यी ६ राशिको भाग्य [वार्षिक राशिफल]
२०७९ साल बैशाख देखि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा
मेरो पुरानो गार्डले बिजी छु भनी फोन काट्यो, ड्राइभरले फोन उठाएन !
तपाइको यो साता कति शुभः ? हेर्नुहोस् चैत्र १३ गते देखी चैत्र १९ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
एस. एण्ड एस. मिडिया प्रा. लि.द्धारा संचालित
ठेगानाः घोराही उपमहानगरपालिका-१७ घोराही, दाङ
सम्पर्क: [email protected]/९८०३१५५५३१